Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Alternative Titles: Oromo Language Stories, Book 1. Edition: Second edition. Issue Date:
Author: Goltizshura Yozshugami
Humni Oromoo jabaachuun warra wal lolaa turan gidduutti nagaya buuse.
Kitaabni Seenaa Oromoo Kan Waggoota Dheeraa Duraa Ibsu Afaan Oromootti Hiikame
Gadaa jaarsummaa ykn manguddummaati. Michillee booddee duulli Kihaaba karaa lamaarraa tahuu jalqabe. Dabballooma waggaa 2. Odaan Bultum kaarra Qurquraarraa gara kibbaatti hamma km 3 fagaatee argama.
Jecha kana kan dubbate A. Hawaasa Oromoo kltaaba Gadaa keessaa yoo fudhannee akkaataa jiruufii jireenya Oromoo, akkaataa qoodama dalagaa, hariiroo ummanni Oromoo hawaasa keessatti waliinqabau, sirna Gadaa keessatti qaama tokko. Ummata ollaa wajjiin waldhabbiin yoo argamees, gumaabaasuufiis tahee, falmu, lola waan ilaaluufi dantaa lammii saanaa guutummatti manguddootaan ilaalamee murtii godhata. Kiiloleen Gadaa isaa fixee Biifoleetti dabarse. Michilleen Faxagar irra dhaabbatee Cafaat, Bazimoofi Daamoot salphatti rukutuu jalqabe.
Amantii sirna gadaa Amaantiin Gadaa ummanni qabaatu keessaa tokko waan sirna Gadaa keessatti hojjetaman aadaa tahee qaama Oromootaa akka ture olitti kaafneerra. Kanaaf, amantiin sirna Gadaas karaa kanaafii kana fakkaataniin jireenya polotikaa ummata Oromoo qajeelchuurratti qooda guddaa qaba.
Seenaaa tokko waggaa saddeet qaba. Jiruu dhufataa deemuudhaan yeroo itti ofdandayutti tarkaanfataniidha. Tuulama keessatti- Luba jedhama. Sadarkaa gossaattiis hariiroon kun ittifufa. Gujii keessatti — Raaba jedhama. Qaalluun gosa beekamaa keessaa haa bahu malee, tokko qofa taha jechuumiti. Waggaa tti Doorama jedhama. Qoondaaloota Gadaa aangoo qabatan sirnaan muudu, eeybisu. Gara walakkaa jaarraa 15faa isa lammaffaa keessa sirna gutuun argamuu dandaye.
Sadarkaaleen Gadaa ilmaan kormaa keessa dabran bakka gariitti amala addaa yoo qabaatanillee waliigalatti akka armaa gadiitti keenya. Heeraafii seerri biyyaa akka aadaatti fudhatamee jabaata, kabajamaas, waan jiruufi jireenya ofii ittiin geggeeffatan taheef oroomoo heerri ni oroomo jechuudha. Ambulance refused to address the elderly despite the sit-4 days.
Click here to sign up. Kanaaf lafa fagoo deemee lola gochuu jalqabe.
Kanaf, hiriyyummaan karaa hawaassfi polotikaa Oromootaa walitti hidhuudha. Kanaanis lubbuun gootota akka J. Ayyaana buttaa malee, kanneen sirna kana fakkaatanii maqaa mataa isaanii qaban sadarkaa oliiti dhaabbata tahanii yeroo beekoomaatti kabajaman hedduudha. Filmaata qondaaloota Gadaarratti yaada kitaba sassaabuudhaan irratti hundeeyfamanii ija filmaata godhamee adda baasanii labsu.
Maqaan Goggeessota Gadaa bakka garagaraatti: Ormoon waan tikfattee tureef qabeenya dhuunfaa loon yoo tahe malee, lafti qabeenya gamtaa ture. Ilmaan kormaatu kormaatu keessa daddabran yoo tahellee, jirenya dhala Oromoo karaa polotikaa, amanti, aadaa, dinagdeefi waraanaafi kkf keessatti kan ilaalu addatti maqaa haaqabaatan malee akkaataan guddinaa, dalagaafii jireenyaa, kan ilmaan Jaarsaa wajjiin tokkuma.
Isaan keessaa garii maqaa dhawuuf: Ayyaana kanarratti Oromoonni dhaqanii galma isaatti qaalluu olii muudu. Guutuu hawaasichaa keessatti yeroo itti aangoon polotikaa Gadaa tokkorraa kanitti dabru, ayyaana kanarratti horiin orpmoo qalamanii, nyaachisni guddaan godhama.
Harkisanis, gadi lakkisanis firiin isaa tokkuma. Lachuu saanii bara tti Gadaarra turan. Arsii keessatti ayyaana baraartiifi guduruu, gurra uraafii jaarraa qaluu c. Fakkeenyaaf Boorana keessatti Goggeessa Gadaa torba qabaatu jira. Eega, hawaasa keessatti Gadoomuuf carraa kan qaban seenaz kormaa thuu hubanne.
Eega Affaarootnifi Saahootni naannoo amma jiran keessa jiraachuu jalqabanii ykn, isaanumatti aananii godaananii qubacuun waan malu. Tuulam keessatti Yuba c.
Akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni ilmaan kormaa tartiibaan keessa dabran sadarkaa Gadaa jedhama. Gaaffi kana deebisuuf, nama Goggeessa Gadaa isaatiin Gadaa keenya jedha.
Kitaaba Afaan Oromoo Haaraa
Firaafii diinni koo eenyu kan jedhu hundi haala gahaatiin deebii quubsaa akka argachuu dandayu shakkii hin qabnu. Lolli sun guyyaa kudhalama deeme. Aantoot Malaak Saggad lolarratti dhuman. Sadarkaalee Gadaafi Murnoota Gadaa a. Kanneen seemaa kana godhanii, yeroo yerotti dhaqanii Qaalluu muudu. Maammoo Mazammir, hayyoota Oromoo ajaja Hayile Sillaaseefi jalee isaatiin wareegamanidha. Ormootaafi waaqa kana kan walqunnamsiisan qaalloota jedhamu. Gochuma gara-jabummaa kana fakkaatuun lubbuunsaa kan badde, hayyuu, qaroofi gootichi Senaa Maaram Gammadaas waan nutti dhaame qaba.
Fakkeenyaaf Boorana keessatti Qaalloota laduu shana jiran kan Maxxaarrii sadaniifi kan Karrayyuu tokkoofi kan Odituu tokko keessaa hunda caala kabajaman Qaalluu Odituuti. Haalli isaanii warra biyya bulchuu ykn qondaaloota Gadaa wajjiin walitti hidhataadha. Boranaafi Gujii keessatti ammoo, yeroon aangoon qabanna tartiibaan waggaa ttifi waggaa tti oromok taheef, yeroon itti aangoof ofqopheessan kun waggaa Gadaa jiddutti taha.